सरकारले आज रातिबाट लकडाउन हटायो, अब स्कुल खुल्ने, लामो छोटो दुरीका सवारीसाधन पनि चल्ने (२६ निर्णयसहित) – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/सरकारले आज रातिबाट लकडाउन हटायो, अब स्कुल खुल्ने, लामो छोटो दुरीका सवारीसाधन पनि चल्ने (२६ निर्णयसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयमा भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले पठनपाठन भने सुरु नहुने जानकारी दिए । सरकारले यसअघि हुन नसकेका परीक्षा सञ्चालनको लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल तथा रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई होटल तथा रेष्टुराँले सेवा दिन सक्ने जानकारी दिए।
होटल तथा रेष्टुराँमा सभा सम्मेलन भने गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी पनि साउन १५ देखि नै सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।भदौ १ देखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने भएको छ। खेलकुदका प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक चरणका खेलकुद पनि भदौदेखि सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।
के/के पाइँदैन ?
ठूला सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार गर्न भने बन्देज लगाइएको छ।शैलुन, ब्युटीपार्लर, जिमखाना, चिडियाखाना, धार्मिकस्थल, स्वीमिङ पुल, सिनेमा घरहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। यी व्यवसायका सम्बन्धमा पछि फेरि निर्णय गरिने प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
त्यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा साउन ३२ गतेसम्मलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् साउन ३२ गतेको मध्यरातसम्म सबै सीमा बन्द गरिएको जानकारी दिए। सरकारले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा साउन ६ गते सम्मलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वदेश आउनैपर्ने नागरिकलाई तोकिएको सीमाबाट आउन दिने कुरालाई यथावत् राखिएको खतिवडाले बताए। यस्तै, सीमाबाट लुकिछिपी प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने उनले जनाए।
नेपाल सरकारले भदौबाट सबै प्रकारका यातायात सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी भदौ १ गतेदेखि छोटो, मध्यम र लामो दूरीका निजी तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। गत चैत ११ देखि बन्द भएको सार्वजनिक यातायात सरकारले असार २६ गतेदेखि छोटो दूरीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, यातायात व्यवसायी तथा मजदूरहरूले साउन ८ देखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। ‘हाम्रो माग नै यही थियो। सरकारले लकडाउन खुलाइ सकेकोले भदौ १ गतेभन्दा पहिले देखि नै चालाउन दिए पनि हामी तयार छौँ’ सिटौलाले भने।
बेहुलाले बेहुलीका भाइलाई गाडीले कि’चि दिए पछि यस्तो बबाल, पूरै जन्ती फ’रार !
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई आज पुल्चोकबाट सोह्रखुट्टे पाटीसम्म तानिने भएको छ ।